Global Voices teny Malagasy » Mavesatra ny tsy fahampian-drano any Afganistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Oktobra 2018 9:36 GMT 1	 · Mpanoratra Ezzatullah Mehrdad Nandika Zo Razafy
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Voina
Loholona iray ao an-tanana manandrana ny rano rehefa avy nampiditra dingana vaovao hanadiovana ny rano ny dokotera avy amin'ny ekipan'ny Fanorenana Indray ao amin'ny faritr'i Zabul. U.S. military. Creative Commons.
Tsy hoe tsy ampy rano foana akory ny tao Afganistana. Raha araka ny tantara dia tany fambolena, izay nahitana renirano nateraky ny ranomandry maro ny lohasahan'io faritra ao Azia io. Ankehitriny, miova ny zavatra.
Nanamafy ny haintany izay nandona mafy ny faritra avaratra sy andrefan'i Afganistan ny lohataona mafana sy maina. Ny sasany milaza fa efa hita nandritra ny amam-polo taona maro ny haintany ratsy indrindra tamin'ireo faritra ireo. Efa tafala tamin'ny asany ny tantsaha ao amin'ny faritra tahaka an'i Balkh, Ghor, Faryab, Badghis, Herat ary Jowzjan noho ny tsy fisian'ny rano hanondrahany ny famboleny.
Nihena tanteraka ny haavon'ny rano ambany tany tao an-drenivohitra Kabul nandritra ny taona vitsivitsy izay. Nitatitra  ny Mpanara-maso ara-toetany ao Etazonia fa nihena teo ho eo amin'ny 1,5 metatra isan-taona ny haavon'ny rano ao Kabul teo anelanelan'ny taona 2004 sy 2012. Midika ho fahakelezan'ny fifehezana fandaniana ny fahalemen'ny lalànan'ny toby fitrohan-drano an'ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Maminavina ireo manampahefana Afgana fa ho ritra ao anatin'ny 10 taona ny rano rehetra ambanin'ny tany ao an-drenivohitra .
Mihena tsikelikely ny rotsak'orana hanamboarana ireny tahiry ireny kanefa matetika lafo ny akora hikarakarana ny toeram-pamokarana ny tohodrano sy ny rano .
Nifampiresaka tamin'ireo tantsaha tompon'ny toeram-pambolena tongolo tany ao atsinanan'i # Kabul  izahay androany, iray amin'ny fanamby lehibe atrehin'izy ireo ny fihenan'ny haavon'ny rano ambany tany nandritra izay taona maromaro izay.
#WaterMatters :Eo anelanelan'ny krizin'ny rano “Ny tanàna folo metropolita any atsimo dia i : Sao Paulo, Buenos Aires, Mexico City, Sanaa, Karachi, Kabul, Beijing, Bangalore, Istanbul ary any amin'ny kaontinantanay, Nairobi.
Efapolo taona niadiana
Namotika fotodrafitrasa ny ady naharitra ho antsasaka taonjato tao Afganistana anisan'izany ny fotodrafitrasa fitaterana rano.Any Kabul, mihevitra ny olona fa andraikitry ny governemanta ny hanome rano madio.
Na dia izany aza, tombanana ho 80% amin'ny mponina 6 tapitrisa ao amin'ny tanàna no tsy mahazo  rano fisotro, raha araka ny fanadihadiana nataon'ny Ivon-toerana Federalin'ny Haitoetany sy ny loharanon-karena voajanahary dia 59% ny rano avy any an-tanànan'i Kabul no tratra n'ny bakteria
Efa nisy tetikasa maharitra tao Kabul. Tokony hampiditra fomba hitehirizana ny ranon'orana ho an'ny mponina ihany koa ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Hanampy amin'ny famenoana ny loharano ao an-tanànan'i Kabul izany. “Tetikasa fitantanana rano fantsona Kabul” | TOLOnews https://t.co/RuYOXnmvJq
Tsy vitan'ny namotika fotodrafitrasa fotsiny ny ady any Afganistana fa nanakana ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ihany koa.
Noho ny tsy fisian'ny fitehirizan-drano, lakandrano sy tohodrano dia 30 ka hatramin'ny 35% ny rano avy any tendrombohitra no mijanona any  Afganistana ary lasan'ny mpifanolo-bodirindrina ny sisa.
Mety hahatratra  hatramin'ny 11 lavitrisa dollara ny vola lany amin'ny famahana ny olan'ny rano ao Afganistana. Niteraka fihenan'ny fanampiana  fa tsy fitomboana ny fahavizanan'ny mpamatsy. Manakivy amin'ny fananganana fotodrafitrasa ihany koa ny olana eo amin'ny fiarovana. Notafihan'ny Talibana  ny tohodrano Salma, notohanan'i India any amin'ny faritra andrefan'i Herat tamin'ny taona 2017. Miaramila Afgana folo no maty nandritra ny fifandonana.
Fiovan'ny toetrandro sy fitomboan'ny mponina haingana
Na dia eo aza ny fandraisana anjara azo tsinontsinoavina amin'ny fampiasana angovo goavana sy ny fandaniana indostrialy izay nitarika fiakaran'ny hafanana ankapobeny dia efa miatrika ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro i Afganistana.
Talaky maso manodidina ny tanànan'i Khwahan, Faritanin'i Badakhshan, Afganistana, 3 Jona 2012. (Sary 37 Ibkraan'i Sgt. Kimberly Lamb) (Navoaka). CC 2.0.
Nohamafisin'ny hafanana tamin'ny fahavaratra ny tsy fisian'ny orana sy ny ranomandry tamin'ny ririnina. Nampitandrina ny mpahay siansa fa hanafaingana ny fitsoniky ny ranomandry izay efa mihena ny haavon'ny maripana. Fa hiavaka amin'izany ny lemak'i Panjshir sy ny faritra sasantsasany ao amin'ny firenena izay mbola betsaka ny rano. Mihazakazaka mankany amin'ny satan'ny tany maina i Afganistana.
Vao maika manamafy ny olana ny fitombon'ny mponina haingana. Ankehitriny, tanàndehiben'ny mponina maherin'ny dimy tapitrisa rakotry ny vovoka i Kabul, izay tsy manana afa-tsy fotodrafitrasa mahazaka ny ampahadimin'ny mponina  monja.
Hahatratra  hatramin'ny 9 tapitrisa ny mponina ao Kabul amin'ny taona 2050, ka izy no tanàna fahadimy mitombo haingana indrindra maneran-tany. Miverina ireo mpitsoa-ponenana, ary mandositra ny tsy fandriampahalemana any ambanivohitra ny olona. Amin'ny ankapobeny, maherin'ny 80% amin'ny mponina no miaina  any amin'ny fanoresanana tsy voaomana. Maro amin'ireo mponina no mividy rano avy amin'ireo mpihady fatsakana na manandrana manamboatra ny lavadranon'izy ireo ihany koa.
Naminavina  ny mpiasan'ny fanisam-bahoaka any Afganistana fa hahatratra 43 tapitrisa ny mponina ao amin'ny firenana afaka 20 taona raha 37 tapitrisa amin'izao fotoana izao, manampy amin'ny rarintsaina manoloana ireo loharano sarobidy. Amin'izao fotoana izao, misy ny famantarana fampitandremana maro ary tsy hita izay fivoarana tsara
High risers going up everywhere in #Kabul  — despite insecurity– like much of the rest of rising #Asia . But my key concern is a lack of #urban  sewage system & fast depletion of surface #water , aside from our national vulnerability to the adverse effects of #climatechange . @UN  pic.twitter.com/hHB4Vq0F6G 
Mipongatra etsy sy eroa ny trano manaka-danitra ao # Kabul na dia eo aza ny tsy fandriampahalemana – toy ny ampahany sisa amin'ny #Asia. Fa ny tena mampanahy ahy dia ny tsy fisian'ny rafitra fitarihan-drano an-tanandehibe sy ny famoahana haingana ny rano, ankoatra ny faharefoana manerana ny firenena manoloana ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro. @UN pic.twitter.com/hHB4Vq0F6G
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/24/125023/
 ho ritra: http://af.shafaqna.com/FA/0215431
 fihenan'ny fanampiana: https://www.afghanistan-analysts.org/the-state-of-aid-and-poverty-in-2018-a-new-look-at-aid-effectiveness-in-afghanistan/
 Notafihan'ny Talibana: https://indianexpress.com/article/world/salma-dam-attack-taliban-afghanistan-live-4721158/
 ampahadimin'ny mponina: https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-water/afghan-capitals-thirsty-residents-dig-deep-to-combat-drought-overuse-idUSKBN1670FO